Abakhiqizi kanye nabaphakeli baseChina China | Jiuhe
Ngaphezu kwalokho, inezinzuzo ezivelele zosayizi omncane, isisindo esikhanyayo, ukumelana nokugqwala, indawo ebushelelezi, ukumelana nokugqoka, ukunemba okuphezulu, izindleko eziphansi, isikhathi eside kusetshenziswa impilo kanye nezindleko eziphakeme ezisebenzayo. ICarbon Steel Zinc Plated Square Nut ilungele ukuhlangana kwezimoto, imboni yamandla, imboni yokwakha imikhumbi, ubunjiniyela bebhuloho, imboni yokukhiqiza ifenisha, imboni yezokukhiqiza ifenisha, imboni yama-elekhthronikhi, imboni yokusebenzisa izinto zikagesi, imishini yokuxhumana, umhlobiso wokwakha, imboni yezokwakha kanye nekagesi, Umkhakha wokulungisa isikhunta, imboni yezindwangu yezokwelapha, imboni ye-Aviation, ezokwakhiwa kojantshi bezempi, njll. Ithola idumela elihle phakathi kwamakhasimende emhlabeni wonke ngenxa yokusebenza okuphezulu.
I-Carbon iron Nylon nati ine-asidi engcono ne-alkali, phakathi kwayo amantongomane we-PVDF ahamba phambili alandelwa yi-polypropylene, womabili lawo ane-acid enamandla ne-alkali, kanti amantongomane e-nylon ane-acid emelana ne-alkali uma iqhathaniswa neyokuqala. Ngakho-ke, amantongomane e-nylon, ikakhulukazi amantongomane we-PVDF, asetshenziswa kabanzi endaweni yokumelana kwe-acid ne-alkali kweminye imboni ye-electroplating.
Qeda Umbala we-Zinc
Ibanga 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9
Thayipha inhloko yesikwele
Ukupakisha Izikhwama + Zezikhwama zepulasitiki
Singanikeza amasampula mahhala zingakapheli izinsuku eziyi-7 uma isikhunta sikhona / sinesitoko, futhi ngemuva kokuqinisekisa ukuhleleka, sizobuyisela umthwalo wesampula.
Khipha ku-internet insimbi engenantambo insimbi yesikebhe ye-anchor bolt yokwakha i-fastener
ethafeni noma i-zinc emile noma emnyama
Esedlule: Flange nati
Olandelayo: Khiya umsoco